Shiinaha 6T kontoroolaha Warshadaha iyo Warshadda | LEEK
Tilmaamaha Magaca Sheyga 6T DC Koontaroolka Matoorka Voltage 36V Watts 350W Codsiga 36V350w hub motor Cycle kit Cycle control Ebike for electric motor kit electric electric baaskiil baaskiil 6 mosfet gudaha koontaroolaha, isku xiraha biyaha iyo isku xiraha caadiga ah ee dooqa.Siirka mowjadda sida caadiga ah, fadlan noo sheeg haddii waxaad rabtaa nooca hirarka sine. Waxay la mid tahay agreemnets -ka KUNTENG LED/LCD. Waxaan sidoo kale bixinnaa kiiska xakamaynta si uu ugu jiro xakameeyaha. Kantaroolayaasha ayaa la rari doonaa kadib marka la tijaabiyo B ...
Magaca Shayga 6T DC Controller Motor
Codsiga Xirmooyinka Baaskiilka ee 36V350w hub
Xakameeyaha Ebike ee xirmada qalabka korontada ee baaskiilka korontada
6 kaneecada gudaha koontaroolaha, isku xiraha biyuhu iyo isku xiraha caadiga ah ee xulashada.
Waxay la mid tahay agreemnets -ka KUNTENG LED/LCD.
Waxaan sidoo kale bixinnaa kiiska xakamaynta si uu ugu jiro xakameeyaha.
Kontoroolayaasha ayaa la dhoofin doonaa baaritaanka kadib
Qalabka wax lagu duubo: Aluminium
Cabbirka: qiyaastii 103*70*35mm
Awoodda la qiimeeyay: DC 36V/48V
Awoodda la qiimeeyay: 350W
Qaabka lagu dabaqi karo: baaskiilka korontada, mootada korontada.
Anti-coaste, ilaalinta isku-dhafan.
Aqoonsi otomaatig ah 36V iyo 48V.
Aqoonsiga otomaatiga ah ee dareeraha Hoolka.
Aqoonsi otomaatig ah xagasha Wajiga ee 60 darajo iyo 120 darajo.
Biriiga heerka hoose/E-ABS.
Biriiga heerka sare/E-ABS.
Xakameeyaha mootada aan caday lahayn.
Naqshad isku dhafan oo loogu talagalay rakibidda fudud.
SIDEE LOO DOORTAA KONTOROOLAHA?
Marka hore fiiri heerarka korantada batteriga ee korontada, oo u dhiganta kontoroolaha korantada ee la soo xulay, fiiri xajmiga koontaroolaha hadda jira ee hore loo isticmaalay, sida hadda uu yahay 16A-18A 350W kontoroole, 22A-24A kontaroole waa 450W, 28A -30A kontoroole waa 500W, 31A-33A waa 600W xakameeyaha, 33A-35A waa 800W xakameeyaha, 36A-38A waa 1000W kontaroole, 40A-43A waa 1200W kontaroole, 50A wuxuu ku saabsan yahay 2000W kontaroole. Xakameeyaha xulashada noocan oo kale ah, haddii gaariga asalka ah uu yahay kontaroolayaasha 350W waxaan ku talinaynaa in la isticmaalo wax ka weyn, si aad uga faa'iideysato xawaaraha ugu sarreeya iyo awoodda mootada.
MUUQAALKA QALABKA KONTOROOLADA MASKUULKA Hawlgallo casri ah oo loogu talagalay hubinta badbaadada.
• Sirdoon leh microprocessor awood leh.
• Barnaamijyada Bluetooth ayaa la heli karaa.
• Masaafada safarka oo la kordhiyay halkii batari.
• Nolosha batteriga oo la dheereeyey.
• Dareemayaasha jagada hoolka ee 60 darajo ama 120 darajo.
• Shaqada ogaanshaha ee caqliga leh.
• Wax-ka-qabashada ka-hortagga sare iyo ka-hortagga shoogga.
• Shaqada dalxiiska ee gacanta
• Shaqada dalxiiska ee baabuurka.
• Hawsha xulashada bilowga adag/jilicsan.
• 3 xawaare (50%-80%-100%ama mugga kale) ayaa shaqeeya
• Shaqada bareega EBS.
• Hawsha dib u noqoshada
• Shaqada neerfaha.
• Shaqada xulashada hore/gadaal
• Shaqada ka hortagga tuugada.
• Shaqaynta xaddidaadda xawaaraha
• Danab hoose & ka -hortag danab
• Badbaadinta kulul.
• Hawsha ilaalinta qaladka ceejinta ayaa marka la bilaabayo.
• Hawsha ilaalinta qaladka ceejinta ayaa marka la ordayo.
BRUSHLESS MUUQAALKA KONTOROOLAYAASHA MOTORKA DCI Iyagoo isticmaalaya MPU caqli badan.
Isticmaalka tamarta hooseeya ee xawaaraha Sare, oo leh wareegga PWM hagaajinta isku midka ah.
Shaqada xaddidan ee baytariga waxay sii dheerayn kartaa cimri dhererka baaburta.
Bilowga weyn ee bilowga ahi wuxuu bixiyaa xawaare aad u sarreeya.
Faragelinta ka-hortagga sare iyo waxqabadka ka-hortagga shoogga.
Xaaladda LED waxay tilmaamaysaa macluumaad khalad oo kala duwan, waxay ka caawisaa dadka isticmaala inay ogaadaan & ilaaliyaan xakamaynta si habboon.
Shaqada ilaalinta baytariga, waxay ka ilaalisaa korantada hoose & korantada korantada iyadoo la yareynayo ama la jaray wax soo saarka batteriga hadda.
Iyada oo leh hawsha ilaalinta kuleylka, ilaalintan kuleylka & wareegga magdhowgu wuxuu bixiyaa xad joogto ah oo joogto ah durng iunder/ka sarreeya xaaladda heerkulka, sidaa darteed waxay si fiican u ilaalin kartaa kontoroolaha iyo baytariga.
La jaan qaada dareeraha hoolka 60 °/120 ° labadaba.
Shaqada ilaalinta cidhiidhiga ayaa curyaamisa xakamaynta haddii fiilooyinka ceejintu furmaan, sidoo kale waxay ka hortagi kartaa hawlgalka xakamaynta haddii furaha korontada la shido inta ceejinta la adeegsanaayo (Wixii ikhtiyaari ah).
Hawlaha safar -gacmeed/hawl -galka dalxiiska ee baabuurta ayaa la heli karaa (Wixii ikhtiyaari ah).
Si otomaatig ah ula jaan qaada dhammaan noocyada matoorada.
Habka bilowga ah ee jilicsan/dhaqsaha leh.
Shaqada casriyeynta onlaynka/offline -ka ayaa la heli karaa.
DHAQAALAHA JOOGTADA AH EE KONTOROOLAAYAASHA WADAHA DC
shaqadu waxay bixisaa dabagalka batteriga waqtiga-dhabta ah (Wixii ikhtiyaari ah)
Isbeddellada hadda socda ee keli -keli ah ayaa bixiya koronto ka ilaalinaysa heerarka microsecond.
Iyadoo shidma kululeeyaha si loo ogaado macluumaad kasta oo kuleyl ah.
Saamaynta nidaamka bareegga EABS ee la isku hagaajin karo oo leh calaamad jebinta xoogga/tabarta daran (Wixii ikhtiyaari ah)
Shaqada beddelidda amniga, xawaaraha dib -u -celinta waxaa lagu dejin karaa 30% illaa 50% xawaaraha gudbinta
Bixinta +5V awood siinta dareeraha hoolka oo leh ilaalin hadda jirta,
Soo Gudbinta, Hawlaha Dhexdhexaadka ah iyo Dib -u -Celinta (Ikhtiyaar ahaan)
3 fiilo oo helitaanka xawaaraha xukuma, sahay dheeri ah +il awoodeed 5V
5 xadhig ayaa laga heli karaa isku xiraha dareeraha hoolka, ma jiro codsi dareeme hool oo loo heli karo ikhtiyaari
Nidaamka kormeerka hadda ee batteriga waqtiga-dhabta ah wuxuu hubiyaa in soo-saarka wax-soo-saarku uusan dhaafi doonin batteriga ugu sarreeya ee hadda shaqeeya.
Hore: Xakamaynta 18T
Xiga: Mootada caday
E Maareeyaha Baaskiilka
Maareeyaha Baaskiilka Korontada
Kontoroolaha Xawaaraha Mootada Korontada
Xakameeye Tricycle Electric
Maareeyaha Baaskiilka Degdegga ah
Maamulaha Simulator -ka Baaskiilka
Maareeyaha Xawaaraha Mootada
Baaskiilka Buluuga ah ee Fudud, E Biyo -mareenka, 22.5 Daboolida Gawaarida, Best Battery Battery Charger Battery, Puck Side Stand, Cidhiidhiga Baaskiilka,